Cabdiwali Turmaag oo 5-Carruur ah uga dhimatay Madfac ku dhacay Hoygiisa! - Banaadisom
Home Arimaha Bulshada Cabdiwali Turmaag oo 5-Carruur ah uga dhimatay Madfac ku dhacay Hoygiisa!
Cabdiwali Turmaag oo 5-Carruur ah uga dhimatay Madfac ku dhacay Hoygiisa!
Dagaalka ka socda Magaalada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo ayaa sababay khasaare dhimasho, dhaawac iyo mid hanti, waxaana ku dhintay dhinacyada dagaalamaya & dad rayid ah oo kuwa lagu dul dagaalamay.
Mid kaid ah madaafiicda dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan ayaa ku dhacay guri ku yaalla Degmada Balad Xaawo waxaana ku dhintay 5-Carruur ah, halka uu ka badbaaday aabahood oo lagu magacaabo Cabdiwali Turmaag Maxamed.
Waxaa go’an isgaarsiinta, Magaalada waxaa ku hoobanaya Madaafiicda dhinacyada dirirtu ka dhaxeyso isku ridayaan, halka Gudaha laga maqlayo rasaasta fud-fudud, qoryaha gawaarida lagu xiro iyo kuwa garbaha laga tuuro.
Inta badan qoysaska Magaalada ayaa xalay fiidkii isaga barakacay Degmada, kadib markii saacadihii lasoo dhaafay dhinacyada dagaalamay ay sameeyeen abaabul & dhaq-dhaqaaq welwel ku beeray.
Khasaaraha dhimashada ayaa ka badan 10-ruux, halka dhaawacyo kale lasoo sheegayo, waxaana xaaladda sii cakiray madaafiic la sheegay in dhanka Mandheera laga soo tuurayo oo qaybo kamid ah Xaafadaha Balad xaawo ku dhaceen.
Xukuumadda Federaalka & DG Jubbaland ayaa kala sheeganaya guullo iyo gacan ku heynta Degmada Balad xaawo, dhanba dhanka kale ayuu dusha ka saarayaa mas’uuliyadda khasaaraha ka dhasha dagaalkaas.